Maxaa ku qasbay wasiirka arrimaha dibadda Iran in uu bixiyo raaligalintan naadirka ah? | Saxil News Network
May 2, 2021 - Written by Baas Rashiid
Qoraalka sawirka,Javad Zarif
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa raaligalin ka bixiyay ka dib markii uu soo baxay cajalad laga duubay taasi oo uu ku cambaareynayo abaanduulihii geeriyoodey ee sida wayn looga qadariyo dalka Iran ee Qasem Soleimani.
Javad Zarif ayaa sheegay in uu rajeynayo in dadka reer Iran iyo gaar ahaan qoyska Soleimani ay iska cafin doonaan.
Cajaladan ayuu Mr Zarif waxaa uu ka hadlayaa halista waxa uu ku tilmaamay faragalinta uu shaqadiisa ku hayay Qasem Soleimani iyo saraakiisha kale ee ciidamada awoodda badan ee ilaalada kacaanka Iran.
Dadka lafa-gura arrimaha Iran ayaa sheegaya in Qasem Soleimani oo ay mareykanka ku dileen duqeyn uu ahaa nin si wayn looga qadariyo dalka Iran.
Waxay u arkaan madaxda Iran in uu ahaa nin aan la cambaareyn Karin oo ay aad u qadariyaan.
Hadalka codka sirta ah ee dadwaynaha loo so dusiyay ee Mr Zarif ayaa waxaa uu dhaliyay muran badan.
Maxaa lagu haystaa Mr Zarif?
Markab ‘basaaska’ u ah Iran oo lagu qarxiyay Badda Cas
Qoraalka sawirka,Qasem wuxuu aad ugu dhawaa hogaamiyaha Iran
Wuxuu astaan muuqata u ahaa saameynta sii kordheysa ee Iran, gaar ahaan bariga dhexe oo ay ku loolamayaan xulafada Sacuudiga iyo Iran